नयाँ आईक्लाउड मूल्य निर्धारण, विकासकर्ताहरूसँग एप्पल टिभी 4, टिम कुक टूर, एप्पल स्टोर अनन्त लूप, र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
पेड्रो रोडस | | एप्पल, Apple TV, iCloud, हाम्रो बारेमा
शुभ प्रभात अनुयायीहरू! हामी यस आइतवार गत हप्ताको समयमा काटेको स्याउको संसारमा सबैभन्दा लोकप्रियको नयाँ कम्पाइलेसनको साथ शुरू गर्छौं। जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ, यस संकलनमा हामी तपाईंलाई सबै सम्झाउँदछौं ती समाचारहरू जुन सोया डी म्याकका अनुयायीहरूले व्यापक रूपमा देखेका छन्।
त्यसोभए यदि तपाइँ के भएको छ भनेर अद्यावधिक हुन चाहानुहुन्छ भने, यो लेख पढिरहनुहोस् र हामी तपाइँलाई औंल्याएको खबरको आनन्द लिनुहोस्। हामीले सुरु गर्यौं एप्पल आईक्लाउड क्लाउड भण्डारण tranches र मूल्य अपडेटको खबरको साथ।
नयाँ आईफोनहरू र आईप्याड प्रोको आगमनको साथ, अन्य चीजहरूको माझ, यो पनि घोषणा गरियो कि क्लाउड क्लाउड भण्डारण मूल्य र ट्रान्चहरू परिवर्तन हुनेछ। परिवर्तनको कथित मिति अर्को सेप्टेम्बर २ 25 मा अवस्थित थियो तर कपर्टिनोको पहिले नै उन्नत भइसकेको छ नयाँ भण्डारण सेक्सनहरू अब उपलब्ध छन्।
यो हप्ता चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीको हप्ता पनि भएको छ जुन पहिले नै धेरै विकासकर्ताहरूको हातमा पुगेको छ। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, इच्छुक विकासकर्ताहरूले सेप्टेम्बर on मा केनोट पछि एप्पल टिभी with को साथ एक विकासकर्ता किट प्राप्त गर्न दुई दिनको बीचमा साइन अप गर्न सक्दछन्। पहिले त्यसो गर्न एप्पल टिभीहरू यस हप्ता प्राप्त गर्न सुरु भयो र त्यसैले यो छ। हामी पहिले नै यसको ट्वीटर र केही ब्लगमा छविहरू हेर्न सक्षम भएका छौं.
जसले यो हप्ता बिर्सदैनन् ती श्रमिकहरू र प्रयोगकर्ताहरू हुन् जो न्यूयोर्कको फिफथ एभिन्यूमा एप्पल स्टोरमा थिए र त्यो हो दुबै सीईओ टिम कुक र उनका सहकर्मी एडी क्यू माथि उल्लेखित एप्पल स्टोरमा आश्चर्यको साथ देखा पर्‍यो र हुन लाग्यो selfies त्यहाँ उपस्थित संग। यो यस्तो भ्रमण हो जुन विकसित हुन सकेको छैन जस्तो कि सामान्यतया छ र हामीले करीव टिम कुकलाई देख्यौं।
हिजो मात्र यो आफ्नो ढोका फेरि खोलियो Cupertino मा नवीकृत एप्पल स्टोर, जुन ठेगाना १ इन्फिटिन लूपमा अवस्थित छ। तपाईंलाई थाहा छ, यो पहिलो एप्पल स्टोर थियो जुन अवस्थित थियो र यसलाई तीन महीना अघि बन्द गरिएको थियो यसलाई अझ आधुनिक एप्पल स्टोरमा बदल्नको लागि। यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो एकमात्र एप्पल स्टोर हो जसमा तपाईले कम्पनीको बजार भेट्टाउन सक्नुहुनेछ र अन्यमा आईफोन वा आईप्याड जस्ता उत्पादनहरू हैन।
यस हप्ताको ठूलो निराशाहरू मध्ये एक नयाँ एप्पल वाच प्रणालीको, अन्तिम मिनेटमा, गैर-प्रक्षेपणसँग सम्बन्धित छ, watchOS 2। तथ्य यो हो कि कपर्टिनोबाट आएका मानिसहरूले थोरै समय अघि रिपोर्ट गर्नु पर्‍यो कि यो रिलीज हुनु हुँदैन किनभने उनीहरूले फेला पारेका थिएनन्। बग अन्तिम मिनेट आलोचक र यसैले आईओएस released विमोचन गरिएको थियो र वाचOSOS २ होइन।
देखिन्छ दोस्रो आधिकारिक फिल्म ट्रेलर एप्पलका धेरैजसो अनुयायीहरू र स्टीव जॉब्सको फिगर, हेर्न चाहन्छन्। यो बायोपिक डायरेक्टरको हातबाट आउँदछ डैनी Boyle र आरोन Sorkin द्वारा एक स्क्रिप्ट संग, जसमा कलाकारहरूको कास्ट महत्त्वपूर्ण छ र जहाँ उनीहरूले हामीलाई यस प्रख्यात एप्पल सीईओ अभिनीत अभिनेता माइकल फासबेन्डरको जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग देखाउँछन्।
El संयुक्त राज्य अमेरिका अपीलको अदालत यो बिहीबारको फैसला सुनायो कि एप्पल अदालतको आदेशको हकदार छ सामसुले यसको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ तपाईंको उपकरणहरूमा पेटन्ट गरिएको। निर्णय गर्न सक्दछ बाध्य कोरियाली निर्मातालाई उनीहरूको स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा केही सुविधाहरू परिवर्तन गर्न। परीक्षणमा केन्द्रित छ Functions कार्यहरू एप्पलले पेटन्ट गरेको सफ्टवेयरको: औंलाले उपकरणको टच स्क्रिन अनलक गर्दै, ला हिज्जे त्रुटिहरूको स्वचालित सुधारर द्रुत लिंक, जसले प्रयोगकर्तालाई चीजहरू गर्न मद्दत गर्दछ कल गर्नका लागि पाठ भित्र फोन नम्बर ट्याप गर्नुहोस्।
हामीले पहिले नै यस खबरको बारेमा कम्पाइलेसन समाप्त गर्यौं जुन यस बारे वार्ता हुन्छ शरणार्थी संकट त्यो हामीलाई युरोप मा नजिक छ र सिरिया को युद्ध संग सम्बन्धित छ। सिरियालाई असर गर्ने युद्धबाट बच्न पर्याप्त मात्रामा हजारौं मानिसहरूले भूमध्यसागरमा प्रवेश गरे र यो वास्तविक मानवीय समस्या बन्न गइरहेको छ। यस अवस्थामा र विगतको स situations्कटमा जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले समस्याहरू निम्त्याएको छ, एप्पलले यस चन्दा प्रणालीलाई सक्रिय बनाउँदछ To देखि २०० डलर अधिकतम र जो कोही चन्दामा भाग लिन सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » नयाँ आईक्लाउड मूल्य निर्धारण, विकासकर्ताहरूसँग एप्पल टिभी 4, टिम कुक टूर, एप्पल स्टोर अनन्त लूप, र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
ब्रसेल्सको शानदार एप्पल स्टोरले जनताको लागि यसको ढोका खोल्यो